Kushambidzika Gloves Mitts Vagadziri & Vatengesi | China Kushongedza Gloves Mitts Fekitori
Kuchenesa Pet Kuchekesa Glove
1.Minwe yedu mishanu yekushambidza glove haingobatsire chete kudzora bvudzi riri kubhururuka mumhepo, zvakare inokurudzira mafuta eganda uye inovandudza zvipfuyo zve'kapfava uye kupenya.Magirovhosi aya anobvisa bvudzi rakasununguka uye zvinyoronyoro kukwiza mhuka dzako dzinovaraidza.
2.Mazano akapfava eiyi minwe mishanu yekushambadzira yekushambidza magurovhosi zvipfeko zvemhuka zviri nyore, iwo akakora urefu nub anoita kuti vhudzi rive nyore kudzura nekurasa.
3.Kuwedzera, kunyangwe iwe uine diki kana hombe chiuno, iri rekushambidza glove rinoitwa kuti rikwane. Tambo yemhando inoita kuti ive yakanyatsokodzera saizi dzese dzechiuno.
4.Iyo inokodzera imbwa dzakareba-bvudzi kana pfupi uye dzakamonana imbwa nekatsi.Iye yakanaka yekubvisa bvudzi bvudzi kune ese masize uye marudzi.
Pet Bvudzi Kubvisa Glove
1.Rubber matipi anopa zvinyoronyoro kutandadza masaja. Ichi chipfuwo bvudzi kubvisa girovhosi rakanakira inonzwisisika & vadiki zvipfuyo.
2.Izvinhu zveiyi pet bvudzi kubvisa girovhosi inochinjika uye inofema, iyo inogadzikiswa ruoko tambo inokodzera vazhinji varidzi vechipfuwo.
3.Glove's velor parutivi zvinobudirira kudzikisa huwandu hwebvudzi rakasiiwa pafenicha, mbatya kana mumota.
4.Iye bvudzi rekubvisa bvudzi rinobvisa tsvina, dander uye bvudzi rakasununguka pane kati, imbwa, bhiza kana imwe mhuka.
Chipfuwo chekukwiza gorosi
Zvipfuwo zvinoda kushambidzika nguva dzose kuti zvichengetedze majasi mune yepamusoro-yepamusoro mamiriro. Kushambidzika pasina kubvisa bvudzi rakafa uye rakasununguka. Iyo peturu yekushambadza yekuchenesa gurovhosi inokwenenzvera nekushongedza jasi, kubvisa tangles uye inomutsa mvere dzemvere, kusimudzira hutano uye kumutsazve.
Kuchekesa Glove Kune Imbwa
1.Iyo imwe yeyakareruka uye inonakidza nzira yekushongedza yako anodurura zvipfuyo. Iyo yekudurura peturu gurovhosi yembwa inogadzira yakashata tangles nemata apo ichisimudza tsvina uye dander kubva mubhachi.
2.Iyo inochinjika wristband inochengeta girovhosi rakasungirirwa paruoko rwako uchinge uchishambidzika.
3.Kugadzirwa kwemativi emusoro mapini zvinonzwisisika, izvo zvinogona kugezesa mhuka dzinovaraidza uchinge uine basa rekukwiza muviri.
4.Iye yekudyara inodurura gurovhosi kune imbwa inochengetedza hutano uye yakachena nekuvapa zvavanoda zvezuva nezuva zvekushambidzika.
Imbwa Kugeza Kudurura Glove
Iyo yakasikwa yerabha bristles pane imbwa yekugezera inodurura gurovhisi bvisa yakasununguka bvudzi uye zvakare kukwiza ganda,
Mucheka weEco unopukuta tsvina mukati memakumbo uye kumeso.
Tambo inogadziriswa inokwana maumbirwo ese emaoko uye hukuru. Iyo imbwa yekugezera yekudonhedza girovhosi inogona kushandiswa kunyorova kana kuoma, vhudzi rinongobvaruka.
Iyo imbwa yekugezera inodurura gurovhosi inogara yakasimba uye inogara kwenguva refu uye inogona kuve mushini yakashambidzwa.